အရင်က နှိမ်မိပါတယ် နောက်ဆိုကျူးကျော် ဆိုပြီး မနှိမ်တော့ ပါဘူး ဘယ်တော့မှ (နှလုံးလှ လူမိုက်များကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်) – GaMone Media
Homepage / Local News / အရင်က နှိမ်မိပါတယ် နောက်ဆိုကျူးကျော် ဆိုပြီး မနှိမ်တော့ ပါဘူး ဘယ်တော့မှ (နှလုံးလှ လူမိုက်များကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်)
အရင်က နှိမ်မိပါတယ် နောက်ဆိုကျူးကျော် ဆိုပြီး မနှိမ်တော့ ပါဘူး ဘယ်တော့မှ (နှလုံးလှ လူမိုက်များကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်)
By Ga MonePosted on March 16, 2021 March 16, 2021
အခုအချိန်မှာ တကယ်ချီးကျူးတာ လှိုင်သာယာကျူးကျော်ထဲက အကိုတွေ ကိုပါ.ညီမ တို့လမ်းထိပ်မှာတပ်စွဲပြီး လမ်းထဲထိ ဝင်ပ စ်နေတဲ့အချိန် ညီမတို့လမ်းထဲက ဂုဏ်သရေမရှိတဲ့ လူကြီးမင်းတို့အိမ်တွေက တံခါးပိတ်ပြီးအခေါင်းထဲဝင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ..ဟိုးဘက်အတွင်းထဲက ကျူးထဲက လူငယ် လူကြီးတွေ အပြုံလိုက် အစုလိုက်
တုတ် တွေ ဒါးတွေနဲ့ သူတို့လမ်းကိုကျော်ပြီး ကိုယ်တွေ လမ်းထိပ်ကိုကာကွယ်ပေးကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းကိုယ့်အကိုတွေကို ထွက်ကြည့်လုပ်တော့ ကျူးထဲကအကိုတစ်ယောက်က ညီမလေးအိမ်ထဲဝင်နေတဲ့ ယောကျ်ားလေးတွေပဲထွက်တိုက်မယ်တဲ့.
ကိုယ့်တောင်ပြန်ဟောက်သွားသေးတယ်။ရေဗူးတွေထွက်ပေးတော့လည်း အိမ်ထဲကပဲပေးပါတဲ့။ ခြံထဲကိုဝင်ပုန်းကြပါလို့ အော်ခေါ်တော့ လည်း…အိမ်ရှင်တွေဒုက္ခ ရောက်မှာဆိုး လို့ မဝင်ဘူးတဲ့ အပြင်မှာပဲဝပ်နေကြတယ်။တကယ်ပါ အရင်ကနှိမ်မိပါတယ်သူတို့မှာလည်း လူသား ဆန်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ နောက်ဆိုကျူးကျော်ဆိုပြီးမနှိမ်တော့ပါဘူး ဘယ်တော့မှ14.3.2021…
အခုအခ်ိန္မွာ တကယ္ခ်ီးက်ဴးတာ လႈိင္သာယာက်ဴးေက်ာ္ထဲက အကိုေတြ ကိုပါ.ညီမ တို႔လမ္းထိပ္မွာတပ္စြဲၿပီး လမ္းထဲထိ ဝင္ပ စ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ညီမတို႔လမ္းထဲက ဂုဏ္သေရမရွိတဲ့ လူႀကီးမင္းတို႔အိမ္ေတြက တံခါးပိတ္ၿပီးအေခါင္းထဲဝင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ..ဟိုးဘက္အတြင္းထဲက က်ဴးထဲက လူငယ္ လူႀကီးေတြ အၿပဳံလိုက္ အစုလိုက္
တုတ္ ေတြ ဒါးေတြနဲ႔ သူတို႔လမ္းကိုေက်ာ္ၿပီး ကိုယ္ေတြ လမ္းထိပ္ကိုကာကြယ္ေပးၾကတယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ လမ္းေပၚထြက္ၿပီးဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရင္းကိုယ့္အကိုေတြကို ထြက္ၾကည့္လုပ္ေတာ့ က်ဴးထဲကအကိုတစ္ေယာက္က ညီမေလးအိမ္ထဲဝင္ေနတဲ့ ေယာက်္ားေလးေတြပဲထြက္တိုက္မယ္တဲ့.
ကိုယ့္ေတာင္ျပန္ေဟာက္သြားေသးတယ္။ေရဗူးေတြထြက္ေပးေတာ့လည္း အိမ္ထဲကပဲေပးပါတဲ့။ ၿခံထဲကိုဝင္ပုန္းၾကပါလို႔ ေအာ္ေခၚေတာ့ လည္း…အိမ္ရွင္ေတြဒုကၡ ေရာက္မွာဆိုး လို႔ မဝင္ဘူးတဲ့ အျပင္မွာပဲဝပ္ေနၾကတယ္။တကယ္ပါ အရင္ကႏွိမ္မိပါတယ္သူတို႔မွာလည္း လူသား ဆန္တဲ့ႏွလုံးသားေတြကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆိုက်ဴးေက်ာ္ဆိုၿပီးမႏွိမ္ေတာ့ပါဘူး ဘယ္ေတာ့မွ14.3.2021…
Previous post နွေဦး တော်လှန်ရေး မှာ ကျဆုံးသွား တဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ကြည့်ပြီး ငိုခဲ့ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့် လာ တဲ့ ဘေဘီမောင်
Next post ဘာမှမပါတဲ့ ကျောပိုးအိတ်လေးသာ လွယ်ပြီး အသက်ပေး ကာကွယ် နေရတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ကို ငွေကြေးအင်အား ထောက်ပံ့ပေးဖို့ တောင်း ဆိုလာတဲ့ ပြည်သူ တစ်ဦး